Wafdi ka socda Midowga Afrika oo wasiiro kula shiray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi ka socda Midowga Afrika oo wasiiro kula shiray Muqdisho
Mareeg.com: Wafti heersare oo ka socdey Midowga Afrika oo ka koobnaa dublamaasiin heerar kala duwan ah oo soo maanta magaalada Muqdisho ayaa wasiiro ka mid ah xukuumadda Soomaaliya.
Waxaa waftiga hogaamineysay haweeneey lagu magacaabo Bineta Diop taasi oo ah ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan haweenka, nabada iyo amniga, waxaa kale oo qeyb ka ahaa safiirka Namibia u fadhiya Midoowga Afrika.
Wasiiro ka tirsan xukumadda Soomaaliya ayaa maanta wafdigaas kula kulmay Muqdisho, iyadoo kulanka oo uu shir guddoominayay Wasiirka Difaaca ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Waxaa sidoo kale ka qeyb galay kulanka Wasiirada Arrimaha gudaha iyo Federaalka, Cabdullaahi Goodax Barre, caafimaadka Cali Maxamed Maxamuud “Cali Xareed”, Wasiiru dowle Burci Maxamed Xamza iyo mas’uuliyiin kale, waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka midyihiin sidii loo xoojin lahaa taageerada Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo xasilinta guud ahaan amniga dalka.
Waftigan ka socda Midowga Afrika ayaa sheegey in ay dalka u yimaadeen in ay indho indheeyaan hawlgalka nabad illaalinta Afrika ee AMISOM, islamarkaasina dowladda Soomaaliya wadatashi kala sameeyaan sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoogan oo ay Soomaaliya yeelato.
Kulanka marka uu soo dhamaaday ayaa waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay waziirka difaaca Soomaaliya iyo haweeneyda gudoomiyaha gudiga Midowga Afrika u qaabilsan arimaha haweenka, nabada iyo xasiloonida waxa ay waraabhinta ay faah-faahin ka siiyeen kulanka oo mudo ku dhow hal saac socday iyo qodobadii kasoo baxay.
Mrs Bineta Diop Wakiilka Midoga Afrika u qaabilsan arrimaha Haweenka, Nabada iyo xasiloonida ayaa sheegtay in waxyaabaha kulankooda kasoo bxay ay ka mid yihiin in laga shaqeeyo horumarinta iyo tayeynta ciidamda AMISOM iyo kuwa qalabka sida ee Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa tilmaamay in ay isla garteen in awood la siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ugu filnaadaan difaaca dalka, marka uu dhamaado joogitaanka ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Kenya oo duqeyn cirka ku qaaday gobolka Jubada Dhexe